Dataset များ (31)
မြန်မာ (21) ကမ္ဘောဒီးယား (20) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (18) ထိုင််း (18) ဗီယက်နမ် (17) တရုတ် (9) Global (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (30) ဗမာဘာသာစကား (2) ခမာဘာသာစကား (1)
WMS (15) KML (13) CSV (12) SHP (11) GeoJSON (10) DB_TABLE (6) ZIP (6) GeoTIFF (4) JPEG (4) HTML (2) geotiff (1) JSON (1) MDB (1) PDF (1) QML (1) TXT (1) XLS (1) XLSX (1)
Open Development Me... (19) Open Development Ca... (4) Open Development My... (3) Open Development Th... (2) Open Development Laos (1) Open Development Vi... (1) The Asia Foundation (1)
ရေအရင်းအမြစ်များ (31) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (13) မြေအောက်ရေ (5) SDG6Clean water a... (4) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (4) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (3) စွမ်းအင် (3) မြစ်ချောင်းများ နှင... (3) စိုက်ပျိုးရေး (2) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (2) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်... (2) ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည... (2) ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအ... (2) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1) ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆေ... (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (1) ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လု... (1) ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငါ... (1) ရေလွှမ်းမိုးမှုများ (1) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (1) မြေယာ (1) ကျေးလက်ရေထောက်ပံ့မှု (1) မြေဆီလွှာ စီမံခန့်ခ... (1) မြို့ပြရေရရှိမှုနှင... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1) ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ... (1) ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခ... (1) ရေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ... (1)
CC-BY-4.0 (11) unspecified (10) CC-BY-SA-4.0 (3) Creative Commons At... (3) License not specified (2) Creative Commons At... (1) Open Data Commons A... (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Water resources None: dataset
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2015၊ 26 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: Gassert, F., M. Luck, M. Landis, P. Reig, and T. Shiao. 2014.... ရေအရင်းအမြစ်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊3မေ ရင်းမြစ်: Greater Mekong Dams Observatory... ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2020၊ 17 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: Donchyts, Gennadii; Baart, Fedor; Winsemius, Hessel; Gorelick,... မြေယာ, ရေအရင်းအမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, ဗီယက်နမ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ထိုင််း, မြန်မာ, တရုတ် 2016၊ 26 စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: Carroll, M., Townshend, J., DiMiceli, C., Noojipady, P., Sohlberg,... ရေအရင်းအမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, ဗီယက်နမ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ထိုင််း, မြန်မာ, တရုတ် 2016၊ 30 စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: Sources vary data from Myanmar, Laos, Thailand and China come... စွမ်းအင်, ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း, ရေအရင်းအမြစ်များ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2015၊9ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: World map of the major hydrological basins (Derived from... စိုက်ပျိုးရေး, စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, မြေအောက်ရေ, ရေအရင်းအမြစ်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2016၊2အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: The dataset is combination of the 1. Hydrosheds level3- World... ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ, ရေအရင်းအမြစ်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2020၊ 20 မတ် ရင်းမြစ်: FAO. 2016. AQUASTAT website. Food and Agriculture Organization of... ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု, မြေအောက်ရေ, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ, ရေအရင်းအမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား 2015၊ 25 နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: Aruna Technology. Rapid Assessment of Prey Land Forest Final... စွမ်းအင်, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး
မြန်မာ 2019၊ 29 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: ostat3.fao.org/download/D/FS/E စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ, ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ဤဇယားသည် ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၄ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုးတက်လာသောရေအရင်းမြစ်များကို ရရှိမှုနှင့် စပ်လျှဉ်းသည့် နှစ်စဉ် စာနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု အညွှန်းကိန်းကို ပြသထားသည်။ ဤဇယားကို ကု...
မြန်မာ 2019၊ 30 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: ရေအရင်းအမြစ်များ
Layer များအတွက် WMS အရင်းအမြစ်များ- မြစ် (၃၇)စင်း
မြန်မာ 2019၊ 28 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Original datasets obtained from the International Finance... စွမ်းအင်, ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ
ဤ Dataset တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် လယ်ယာမြေများသို့ရေးပေးသွင်းရေးဆည် များအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တည်ဆောက်ပြီးသော၊ အဆိုပြုထားသော၊ စီစဉ်ထားသော ဆည်များ၏တည်နေရာကိုဖော်ပြထားသည့်အချက...
ကမ္ဘောဒီးယား 2016၊ 21 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Ministry of Rural Development of Cambodia, Tonle Sap Rural Water... ကျေးလက်ရေထောက်ပံ့မှု, မြေအောက်ရေ, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ တိုးတက်စေရန်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှု, ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း
This dataset contains information of well locations, water quality (arsenic, iron contamination...), drilling, digging and lithology. The well map database is an initiative of...
ကမ္ဘောဒီးယား 2015၊ 26 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: Gassert, F., M. Luck, M. Landis, P. Reig, and T. Shiao. 2014.... ရေအရင်းအမြစ်များ
မြန်မာ 2019၊ 21 မေ ရင်းမြစ်: GAD 2016-2017 - http://www.gad.gov.mm ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ရေအရင်းအမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2015၊ 27 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: Freshwater Ecoregions: Abell, R., M. Thieme, C. Revenga, M. Bryer,... ရေအရင်းအမြစ်များ
Freshwater species and habitats are, on average around the world, more imperiled than their terrestrial counterparts. Yet, large-scale conservation planning efforts have rarely...